Dawlad masuul ah oo dadkana matasha Q3 | Somaliland.Org
Dawlad masuul ah oo dadkana matasha Q3
November 30, 2007	Ahmed Arwo
Waa qormadii seddexaad ee geedi-socodka dimuquraadiyadda furan ee adduun weynaha. Ujeedada socdaalkeena taariikheed waa inaynu dhabadii la soo maray dib u qaadno, si aynu daawo ugu helno xanuunada aafeeyey nidaamka aynu indho la’aanta u qaadanay.
Habkii wakiilnimada looga baahnaa in lagu helo Gole si dhab ah u matala bulshada guud ee mihnad iyo degaan kala gedisan leh. Waxa la arkay dheelitir la,aanta ka jirta labada Gole ee barlamaan, si gaar ah kan Guurtida (Lords), oo lagu abaal mariyey amiiradii dagaalka iyo reerihii boqortooyada ku xidhnaa iyo maal iyo dhul-qabeen xoogan. Kolka degaan loo eego waxa ay badi ka yimaadeen agagaarka caasimada London oo ah gobalada loo yaqaan Gobalada Koonfur Bari (South East Regions).
Doodo iyo qoraalo ay marwalba badhitaarayaan banaanbaxyo iyo dhagaxtuur,waxa garashadu keentay in doorashada la ballaadhiyo. Waxay se cajaladdu ku socotay tallaabo diin. Waxa la oggollaaday in codbixinta la siiyo ciddii dawladda cashuur siisa oo ah maalqabeenka iyo amiirada gobbalada, oo weliba ku kooban ragga 40tan jirka ah iyo waxii ka weyn. Waxa xigtay in lagu kordhiyo isla colkaas inta xaas leh.
Dhinaca ragga qunyar socodka ah oo ka cabsi qabay in xoogsatada aan cilmi lahayni ay si xun awoodda ugu tagrifali doonaan,. Waxaana ka mid ahaa labada qoraa ee Blackstone iyo Burke oo qoray buuga Burk’s Works 1782. Waxuu Burke yidhi “….. distoor ka dhashay dhaqan, caado, fikrado, dareeno, dhacdooyin, akhlaaq, taariikh iyo maan-dood ay qarni ilaa qarni dadkeenu iska dhaxlaayey oo tijaabo nooc kasta soo martay, ma aha inaynu ku bedelno fakir rag debdedda ah iyo dhowr gudaha ihi keeneen oon tijaabo gelin..”. Waxuu duray dareenka ah nabadda iyo degnaanshaha England kaga duwaneyd Yurubta kale inay sal u thay nidaamkan aan loo sinnayn.
Sidoo kale waxa cod bixinta aqoonyahanka laga dhigay inuu xaq u yeesho laba cod, sidoo kale mihnadleyda oo cod gurigiisa ah iyo mid shaqadiisa ahba la siiyey.Mabda’ ay taasi ku dhisnayd waxa ay ahayd inaan fahamka nidaamka dawladeed loo sinnayn, isla markaasna aan dhibteeda iyo dheefta go’aankeeda loo sinneyn. Go’aan dawlo, wax yar ayuu ka taabanayaa danyarta u badan kuuli iyo beeraley, bal se hantiilaha meelo badan ayey ka taabanaysaa. Waxa la sii xoojiyey kaalinta jaamacadaha oo tiro go’an loo sarjaray, isla markaasna doorashada cidda matalaysa jaamacadaha loo daayey iyaga oo keliya.
Waxa sanadkii 1832 loo arkay mid raadweyn ku yeeshay hawsha iyo habka loo doorto golaha wakiilada. Waxa ay fure u noqotay, in laga gudbo fikirkii ahaa in magaalo keliye matasho magaalooyin kale. Waxaana la soo bandhigay in muwaadinku qof ahaan ka qiimo badan yahay hanti amba maqaam uu hayo. Taas darteedna loo baahan yahay in muwaadin kastaa xaqa matalaadda uu gaar u leeyahay. Kolkii codbixinta inta badan la oggoladay iyadoo laga reebay dumarka, waxa xigtay in la dhaqangeliyo sharciga Tacliinta ee 1870, taas oo waajib lagaga dhigay dawladdu inay dadweynaha wax barto, si awoodda codbixineed iyo ka qayb galka maamulka dawladeed u noqdo mid tamar leh. Waayo nidaamkan dimuquraadiyada furani, waxa loo arkaa mid u baahan in dadweynaha nuxurka qarannimo iyo mas’uuliyadda dawladeed la baro, isla markaas ay noqdaan dar dawladda u yaqaan shaqaale ay iyagu qorteen, kugula xisaabtama hawsha ay u dirteen. Taasi waxay aad uga fogtay fikirka dadka aan aqoonta lahayn qabeen ee ahayd inay dawladdu dadka leedahay, oon marna diidmo iska daa la-xisaabtani, ayna meesha oolin.
Arrintanai waxay meesha ka saartay labaa codeentii ay haysteen aqoonyahanka iyo maalqabeenku, iyadoo la gaadhay heer la qiimeeyo xorriyadda qofka iyo madaxbanaanidiisa fikradeed oon ku xidhnayn qabiilka uu ka soo jeedo, iyo mihnadda uu ku xoogsado. Waxayna timid markii olole xoogan loo galay in dadweynaha wax la baro oo weliba xaqooda siyaasi iyo waajibaadkooda hagar la’aan loo iftiimiyey.
J.S.Mills oo ka mid aha aqoonyahanka marxalado badan la soo maray geedi socodka dimuquraadiyada, ayaa si cad u bayaamiyey in dooda ah inta isku shaqada haysaa waa isku fakir u beeniyey, isagoo daraasad weyn ku sameeyey afkaarta ay kala qabaan shaqaalaha isku mihnidda ahi. Buugiisa(Representative Government), waxuu ku caddeeyey in loo baahan yahay in la qadariyo qiimaha muwaadinka ruux ahaan, oo aad uga culus danta shakhsi ee dhaqaale. Waxuu yidhi, “……Dawladi waa tan dadkeeda ugu dadaasha horumarka nooc kasta ha ahaatee. Houmarna waxa ugu fiican nidaamka oggolaada in tirada ugu badan ee muwaadiniintu ka talo bixiyaan hawlaha qaranka si toos ah amba si dadban. Taasna waxa lagu gaadhayaa in codbixinta la siiyo si siman muwaadiniinta oo dhan.”
Mr. Mills isagoo arrintan ka hadlaaya waxuu yidhi, ” Ragga iyo dumarku waa isku mid, waxa keliya ee ay ku kale duwan yihiin waa abuurista jinsi oo keliya. Waa cadaalad darro cid walba u cad inaan dumarka la siin xaqa codbixinta. Muwaadiniinta jinsiga loo kala saaray waa dulmi iyo duudsi loo badheedhay. Bulsho kala badh dadkeedu dolman yahay horumar ma gaadhi karto.”
Haddaba bal ila noqon oo maskaxdaada ku nasi halganka dheer ee xaqa cod bixinta loo soo maray. Sideey kola tahay fahamka dadweynaheenu u yaqaan shaqada barlamaanka iyo hawsha dawladda. Ma yihiin dar u arka dawladdu shaqaale iyaga u shaqeeye. Miyeyna waajib ahayn in garaadkooda siyaasi iyo aqoontooda nolaleed kor loo qaado. Kolka qabiil ay ku dooranayaan wakiilka, ma waxay ogyihiin shaqo reerkooda u gaar ah oo golaha wakiilada laga fulinaayo.Weli ma maqasheen dood barlamaan oo reer hebel dano gaar ah oo ay leeyihiin lagu hayo. Maxaa inoo diidan inaan ummaddena jahliga ka saarno. Waxa cad in in badan oo inaga tirsani aqoon darrada dadweynaha ka fa’iideystaan si guracan, oon marna rabin in dadka dariiqa toosan loo tilmaamo. Waa se mid lama huraan ah. Oo haddii laga gaabiyo, waqtiga ayaa dadka tababari doona, oo maalinbaa iman indhaha dadweynahu furmi doonaan, oon qabiil iyo danta guud oo laga laaluushaa hadhi doonto.
Aynu noqono mucaa’rid iyoi muxaafidba dar wanaaga ku tartama, dar danta guud ilaaliya, iyo qaar aan aqoonta iyo jileeca dadkeena ka danneysan. Aynu ogaano inaynu Islaam nahay, xisaabta aakhirna ina sugeyso. Illaahay hayna tuse xaqqa, haynaga dhigo kuwa u gargaara cadaaladda.